November 29, 2020 Xuseen 7
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa ka guurey qasri kiro ah oo uu ka deganaa gudaha magaalada Garoowe mudadii uu joogey xafiiska madaxtooyada Puntland.
Karaash, ayaa si rasmi ah ugu wareegey dhisme cusub oo laga dhisay qayb kamid ah qasrigii hore ee madaxtooyada Puntland, kaasi oo loogu talagalay madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga iyo kuwa dambe ee iman doona mudada ay xafiiska joogaan.
Dhismaha qasriga cusub oo dabaq ah ayaa waxaa ku baxay dhaqaale badan oo ay xukuumaddu bixisay, sida ay Puntlandtimes u xaqiijiyeen saraakiil katirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu degan yahay qasriga madaxtooyada Puntland, waxaana hadda socda dhisme cusub oo loo diyaariyey xafiisyada madaxweyne ku-xigeenka oo lagu soo kordhiyey madaxtooyada.
Ahmed Karaash Waxuu Ka Mid Yahay Dadka Dhulbahante Dullinnimada Ay Ku Jiraan Maanta U Horseeday…Waxuu Isku Diraa Kooxaha Siyaasiyiinta Dhulbahante Ee Ku Sugan Garowe….Ma Tagi Karo Xuddun iyo Taleex Toona ….Waxna Uma Qaban Karo Dadkiisa SNM Gumaaddo….Aqoon Ahaan Waa Qof Aan D.Sare Xataa Ka Bixin…Waana Qayb Ka Mid Ah Nasiibdarrada Haysata Beeshan….
benlow ayaa thy oday wax og dawarawiisha ha u gafin linkaan waa libaax rer buntland qadarin wayn ayay u hayaan shacabka boohoodle iyo cayn xudun iyo taleex waa mesha kasoo jeedo marka waa masuul wayn ha u gafin madaxda afkaaga suubso
benlow ayaa thy oday wax og dawarawiisha ha u gafin ninkaan waa libaax rer buntland qadarin wayn ayay u hayaan shacabka boohoodle iyo cayn xudun iyo taleex waa mesha kasoo jeedo marka waa masuul wayn ha u gafin madaxda afkaaga suubso
Rer somaliland aqli maleh ninka Dhulbahante e Puntland xilka kahaya wey cayaan kan iyaga uhayana wey amanan hada ninka dhulbahante xagee waxka yahay o awoodku leyahay xaqiiq wa Puntland waana dadkisii waxuu doono hadu sameyo cid waxka qadi kadha majidho waa landhere banan degay lakin xaga kale kaga quuso ciyarihii dhacay dhawan ceebtoda marka md karaash waa nin dhulkisi joga waliba geesi ah💯🙏
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Mr carwash dhulkiisa lama hayo soool waayo dhulbahante dhulkoodii wey xareshteen marka karaash iyo kooxdiisa mana aha iney hogaan ka qabtaan Puntland.
Dastuurka Puntland waxa ku qoran im Madaxweynuhu xilalka muhiimka ah iyo Dawlada kala tashado ku xigeenkiisa.
Inkasta oon anigu aamin sanahay in jiheynta iyo go’aanka uu kama danbeysta yeesho Madaxweynuhu oo xitaa aanan lagu khasbin inuu talo kasugo ku xigeenkiisa oo Dastuurkiina intaas laga saaro. Sowtii uu Deni afka ciida Karaash u daray maaha? Sowkii Deni tooska u jabiyay qodobkaas Dastuurka idiinku qoran maaha? Karaash oo leh Madaxweynuhu ilama tashado oo waxan uusoo magacaabey Dastuurka ayay hareer marsan yihiin, sowtii toos waar ama tag ama iska qayil loogu yidhi maaha? Waa maxay Awooda uu ku leeyahay meesha?
Nin shib iska yidhi weeye oo wax uun loo yeedhiyo. Shut up or hit the road. Kkk Garaadada Dhulbahante waxa Garoowe lagu yidhaahdaa sadex illaa iyo shan daqiiqo wax ka badan ma hadli kartaan kolkaad shirarkayaga siyaasada ka hadleysaan. Shirkii wada tashiga ee berigii dhoweyd Puntland ka dhacey sowkii Garaadka Garaadada Dhulbahante ugu weyni lahaa hadalka soo koobaa la’igu yidhi ee wuxuu ka hadlo iyo jiho uu abaaroba garan la’aa maaha.
karaash walaa iyo siyaasi kale ayaanan Dhulkoodiina tegi karin, kiinana wallaaney habeen ku negaadeen hadey Puntland kasoo horjeestaan. Kii SSC laga maqlaa Muuqdisho kama sokeeyeen. Kkkk
Nimanka aad iska jaa’ifeyneysaan ee Reer Sonaliland, Wadankoodii ayay joogaan. Mansabyo muhiim ah ayay hayaan. Talada ayay wax ka gooyaan. Awood dhaba ayay leeyihiin. Dhulkooda dacal illaa iyo dacal ayay ka maraan.
Hadey doodaadu tahay kuwa qadiyada kasoo horjeedaa Somaliland kuma noolaan karaan, dee sxb kuwaasi waxey la siman yihiin kuwa Isaaqa, Samaroonka, Ciisaha iyo qolyaha kalaba ah ee Xamar ka haya xilalka maqaar saarka ah amaba aanan wax heyn ee maalina guryaha islaameed bariiska qalalan ka cuna, maalina makhaayadaha cuntadu kaladhka ku dhevrn yihiin. Kkkk